Xuquuqda xilliga wakhtiga magan-gelyada | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah / In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan / In la ahaado magan-gelyo doon / Xuquuqda xilliga wakhtiga magan-gelyada
Inta lagu jiro wakhtiga magan-gelyada waxaad xaq u leedahay daryeel caafimaad, hoy, taageero dhaqaale haddii aad u baahantahay. Halkani waxaad ka akhrisan kartaa dheeraad ku saabsan nooca xuquuqyada aad leedahay.
Xuquuqda daryeel caaafimaad
Waxaad xaq u leedahay daryeelka bukaanka ee daryeelka ilkaha ee deg-dega ah iyo daryeelka aan la sugi karin xilliga wakhtiga aad tahay magan-gelyo doon. Waxaa kale oo aad xaq u leedahay daryeelka ummulida, daryeelka marka ilmo la iska soo tuurayo, talo bixinta alaabta uurka la isaga ilaaliyo, daryeelka hooyada iyo daryeelka caafimaad ee ku xusan sharciga ka hortaga cudurada faafa.
Caruurta iyo dhalinyarada magan-gelyo doonka ah ee ka yar 18 sanno waxay xaq u leeyihiin daryeel bukaan iyo daryeel ilko oo la mid ah sida ka caruurta kale ee ku nool Iswiidhan. Daryeelka bukaanka ee caruurta badanaaba waa bilaash.
Dheeraad ku saabsan waxa aad samaynayso haddii aad xanuusato ka akhriso halkan.
Hey'adda Socdaalka waxay kugu casuumaysaa hoy ku meel gaar ah xilliga wakhtiga aad sugayso go'aanka. Hey'adda Socdaalka ayaa bixinaysa kharashka hoygan haddii aanad haysan wax lacag ah.
Adigui waxaad xaq u leedahay hoy ku haboon baahidaada haddii aad ku jirto xaalad dhib leh oo aad u adag. Tani waxay khuseysaa tusaale ahaan adigaaga ah:
Ragga ka hela ragga, dadka labada jinsiba ka hela ama dadka aan jinsiba ka tirsanayn
Tahay qof gaboobay oo baahiyo gaar ah leh
Tahay qof keligii ah oo haysta caruur ka yar 18 sanno
Miyaad ka yartahay 18 sanno oo aad timi Iswiidhan iyadoo aanay kula socon waalidkaa
Leedahay xanuun halis ah
Leedahay hoos u dhac laxaadka ah
Leedahay dhibaatooyin maskaxiyan ah
Baahi u qabtid hoy si gaar ah kuugu haboon oo ay sabab u tahay waxa ku soo maray, tusaale ahaan haddii ay dhibaato kaa soo gaartay ka ganacsiga dadka, jidh dil, kufsi, gudniinka haweenka ama noocyo kale oo ah dhibaato ah maskaxiyan, jidh ahaan ama jinsiga ah.
La hadal shaqaalaha Hey'adda Socdaalka xaruntooda qaabilaada sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah haddii aad baahi u qabtid hoy si gaar ah kuugu haboon.
Dheeraad ku saabsan hoyga xilliga wakhtiga magan-gelyada ka akhriso halkan.
Xaqa taageero dhaqaale marka loo baahdo
Ugu horeyn waa inaad adigu is masruuftaa. Haddii aanad haysan wax lacag ah, ama aanad shaqaysan, waxaad kaalmo dhaqaale ka dalban kartaa Hey'adda Socdaalka.
Dheeraad ku saabsan lacagta xilliga wakhtiga magan-gelyada ka akhriso halkan.
Xaqa in la shaqeeyo
Si loo helo xaqa in la shaqeeyo xilliga wakhtiga aad tahay magan-gelyo doon waxaa khasab ah inaad heshay caddaynta ah in laguu oggolyahay shaqo xilliga wakhtiga aad sugayso go'aanka codsigaaga magan-gelyo. Tani waxaa lagu magacaabaa in la helo AT-UND. Waxaad AT-UND ka heli kartaa Hey'adda Socdaalka.
Dheeraad ku saabsan AT-UND iyo in la shaqeeyo xilliga wakhtiga magan-gelyada ka akhriso halkan.
Xuquuqda haddii aad leedahay hoos u dhac laxaadka ah
Haddii aad leedahay hoos u dhac laxaadka ah taas oo raad kugu yeelatay jir ahaan iyo caqli ahaan waxaa tani lagu magacaabaa in la leeyahay hoos u dhac laxaadka ah. Adigaaga leh hoos u dhac laxaadka ah waxaad leedahay xuquuq gaar ah xilliga wakhtiga aad tahay magan-gelyo doon:
Waxaad heli kartaa caawimaada inaad la hadasho shaqaalaha Hey'adda Socdaalka marka aad is dhiibto.
Waxaad xaq u leedahay hoy haboonaantiisu gaar tahay.
Waxaad xaq u leedahay taageero kuu fududeysa inaad soo dhex gasho bulshada Iswiidhan haddii aad hesho sharci daganaansho.
Dheeraad ku saabsan waxa khuseeya adigaaga leh hoos u dhac awooda ah ka akhriso halkan.
Adigu baabuur waad ku wadi kartaa Iswiidhan haddii aad ka weyntahay 18 sanno oo aad haysato ruqsada baabuur wadida ee dal kale. Adigu waxaad baabuur ku wadan kartaa Iswiidhan xilliga gebi ahaanba wakhtiga aad tahay magan-gelyo doon. Ka dib marka aad hesho sharciga deganaansho waxaa khasab ah inaad ruqsadaada baabuur wadida ku baddeshid ruqsada baabuur wadida iswiidhishka ah gudaha hal sanno laga soo bilaabo markii aad samaysay diiwaan-gelinta dadweynaha. Mararka qaarkood waxaad u bahan kartaa inaad akhrisato qawaaniinta taraafikada oo samayso imtixaano cusub si aad u hesho ruqsada baabuur wadida ee iswiidhishka.
Dheeraad ku saabsan liisanka baabuurka ee Iswiidhan ka akhri halkan.
Xuquuqda caruurta ee xilliga hawsha magan-gelyo doonka socoto wuu ka duwanyahay ka dadka waaweyn.
Iswiidhan dhamaan wixii ka yar 18 sanno waxaa la xisaabiyaa inay yihiin caruur. Caruurta magan-gelyo doonka ah badankoodu waxay Iswiidhan si wada-jir ah ula yimaadaan mid ka mid ah waalidkooda ama labadaba. Waxaa kale oo jira caruur badan oo Iswiidhan yimaada iyagoo ah bilaa waalid ama qof kale oo haysta mas'uuliyada sharci ee ilmaha. Iyagu waxay u baahanyihiin taageero gaar ah.
Adigaaga yimi Iswiidhan iyadoo aanay waalidkaa kula socon.
Akhriso dheeraad ku saabsan xuquuqda caruurta ee gudaha Iswiidhan.
Caruur waxay xaq u leeyihiin inay tagaan dugsiga xanaanada iyo iskool
Dhamaan caruurta iyo dhalinyarada magan-gelyo doonka ah waxay xaq u leeyihiin inay tagaan dugsiga xanaanada, iskoolka ama dugsiga sare.
Dheeraad ku saabsan iskoolka xilliga wakhtiga magan-gelyo doonka ka akhriso halkan.
Caruurtu waxay xaq u leeyihiin daryeel caafimaad
Dhamaan caruurta magan-gelyo doonka ah waxay xaq u leeyihiin daryeelka bukaanka iyo daryeelka ilkaha oo leh shuruudo la mid ah sida caruurta kale ee ku nool Iswiidhan. Daryeelka ilkaha wuxuu bilaash u yahay qofka ka yar 18 sanno. Daryeelka bukaanka badanaaba wuxuu bilaash u yahay qofka ka yar 18 sanno.
Dheeraad ku saabsan waxa aad samaynayso haddii ilmahaagu xanuusado ka akhriso halkan.
Xaqa in rafcaan la qaato
Adigu waxaad xaq u leedahay inaad rafcaan ka qaadato Hey'adda Socdaalka go'aankeeda haddii la diido codsigaaga magan-gelyo.
Dheeraad ku saabsan in rafcaan laga qaato go'aanka codsigaaga magan-gelyo ka akhriso halkan.